Uhuru Kenyatta oo budhcad ku tilmaamay Garsoorayaasha Maxkamadda sare
Home WARARKA Uhuru Kenyatta oo budhcad ku tilmaamay Garsoorayaasha Maxkamadda sare
Nairobi(Berberanews):- Madaxweynaha dalka Kenya, Uhuru Kenyatta oo dib u doorashadiisa ay waxba kama jiraan ka soo qaaday maxkamadda saree ee Kenya ayaa mar uu ka hadlayay suuqa Burma ee magaalada Nairobi waxaa uu Guddomiyaha Maxkmadda sare David Maraga iyo Garsooreyaashiisa, waxa uu ku tilmaamay kuwo Budhcad ah.
Madaxweyne Uhuru, ayaa markii lagu dhawaaqay go’aanka Maxkamadda sheegay in uunu ku qanacsaneyn go’aanka Maxkamadda, balse uu ixtiraamayo, waxaana uu ku baaqay in nabadda laga shaqeeyo.
Guddiga doorashada ayaa ku dhawaaqay in madaxweynaha talada haya Uhuru Kenyatta uu ku guulaystay doorashada, isaga oo ka horreeyay Raila Odinga 1.4 milyan oo cod. Laakiin mucaaradka ayaa sheegay in la jabsaday hannaankii combiyutarada guddiga doorashada laguna shubtay natiijada.
Previous articleSarkaal ka tirsanAl-shabaab oo duqayn cirka ah lagu dilay
Next article“Wiilka Badda ku Dhintay Laashka ayuu iska Tuuray, ” Badhasaabka Saaxil